CBI က ဖွင့်လှစ်တဲ့ In-House သင်တန်းကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ များအားလုံးအတွက် ဇူလိုင်လမှာတော့ Monitoring & Evaluation (Online) သင်တန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
သင်တန်းကို Weekend နဲ့ Weekday ဆိုပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ တက်ရောက်ချင်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမ တို့အနေ့ဖြင့် မိမိတို့ အဆင်ပြေမယ့် နေ့ရက်ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်မယ့် ခေါင်းစဉ်များ၊သင်တန်းအချိန်များ နှင့် သင်တန်းကြေးများကို Training Flyer မှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။
We would like to invite you to join the free training on Conflict Resolution for Peaceful Communities. This will be 2-hour online training via zoom that will focus on understanding the fundamentals of conflict, how conflicts arise, and what are some of the tools for conflict resolution. The training is intended for individuals and organizations working with communities in Myanmar.
Date: 3rd of July, 2020
Please register here for training
စီဘီအိုင်ရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် မိမိတို့အိမ်မှနေ၍ အလုပ်လုပ်လိုပါက လုပ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရုံးချိန်အတွင်း ရုံးဖုန်းကို ဆက်သွယ်၍မရပါက အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) သည် လူစုလူဝေးများပြားရာနေရာများတွင် လျင်မြန်စွာ ကူးစက်နိုင်သည့်အတွက် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် လူစုလူဝေးဖြင့် ပြုလုပ်သော အခမ်းအနားများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များကို မပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ကြေညာထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာသောအားဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ စီဘီအိုင်သင်တန်းခန်းမ၌ လစဉ် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းများကို ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။